Home Wararka (Daawo) MW hore Xasan Sheekh oo ka digay in Galmudug aanay ka...
(Daawo) MW hore Xasan Sheekh oo ka digay in Galmudug aanay ka dhicin wixii ka dhacay Baydhabo
Madaxweynihii hore ee JFS Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi siiyay idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho aya ka digay in doorashada Galmudug loo maamulo sidii loo maamulay doorashadii Koofur Galbeed isagoo ka dhawaajiyay in haddii ay taa dhacdo ay ka dhalan doonto dagaal ba’an oo ka dhaca degaanada Galmudug.
Wareysiga oo dhinacyo badan taabanayey ayuu MW Xasan Sheekh mar uu ka jawaabayay heshiiskii dhex maray madasha xisbiyada iyo MW Farmaajo uu sheegay in ay tahay nasiib darro in aay Madaxtooyada weli ka hadal wixii ay ku heshiiyeen, wuxuuna intaa ku daray mar la weydiiyay sababta in ay tahay in Farmaajo aanu raalli ka ahayn wixii lagu heshiiyay isla markaana aanu diyaar u ahayn in uu fuliyo heshiiskii ay wada galeen.
Ma aha markii ugu horreeysay ee lagu eedeeyo Farmaajo ballan ka bax iyo been, waxaana shacabka Soomaaliyeed ay mar walba hadal hayaan qudbooiyinkii uu ku galay doorashada taasoo uu sameeyay ballan qaadyo badan. Ballan qaadyadiisiina aanu hal mid ah ka fulin iyadoo hadda ay muddo xilliyeedkiisa talada dalka ay ka harsan tahay hal sano.
Halka hoose ka dhageyso wareysiga.